मृत्युदण्डको मृत्यु पंक्ति कैट्रीशिया ब्ललोमन
मौत पंक्ति मा उनको छोरी को क्रूर हत्याको लागि
पेट्रिया ब्ल्यामोनमा उनको 28-माह-जन्मेको डोमिनिनीका मृत्युमा राजधानी हत्याको लागि अल्बामामा मृत्यु पङ्क्तिमा छ। कालामोनले हत्या गरेको9महिनाअघि Dominiqua लाई अपनाईएको छ।
2 9, 1 999 मा, पेट्रिया ब्ल्यामोन,29 बर्षको उमेरमा91-1 मा डुथनको दुतावासमा बोलाएकी थिइन् किनकी तिनकी छोरी डोमिनिनीको सांसद थिएन। जब सम्वन्धी Blackmon को मोबाइल घर पहुंचे, उनि Dominiqua मास्टर शयन कक्ष को तल मा झूठ पाया - त्यो केवल एक डायपर र रगत भिगोने मोजे पहने थियो, उल्टी मा कवर थियो, र उनको साँस नहीं थियो।
उनको छाती मा उनको माथे र रगत मा एक ठूलो टक्कर थियो।
आमाबाबुले तिनलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरेपछि उनी फूल अस्पताल आन्तरिक कक्षमा फर्किएपछि उनको मृत्यु भएपछि केही समय पछि मरे । दुई डाक्टरहरू, डोमिनिआका बाल चिकित्सकहरूमध्ये एक, डा। रबर्ट हेडले बच्चालाई जाँच गरे र फेला पारे कि उनीसँग धेरै चोट र शंका र उनको छातीमा एक जूताको एकमात्र छाप छाप्यो। उनी डोमिनिनीका धेरै पुराना निशानहरू पनि देखे, अघिल्लो घाइतेहरू र उपचारका विभिन्न चरणहरूमा थिए।
उनको शरीरमा भेटिएको 30 अलग चोटहरूमा समावेश गरिएको, मेडिकल परीक्षक डा अल्फ्रेडो परेडहरूले उनको निचो छाती र माथिल्लो पेटको र दाहिने ग्रोइनको अगाडि भागमा स्वाद पाए। उनले पनि एक भंग लिनु सामना गरेको थियो।
उनले पनि पाया कि डोमिनिनीको दुई टूटा हड्डिहरु र धेरै अन्य चोटहरू थिए जुन उपचारको विभिन्न चरणहरूमा थिए। परेडले निष्कर्ष निकालेको थियो कि उनको मृत्यु उनको टाउको, छाती, पेट, र extremities को लागि धेरै चोट-बल चोटहरूको कारण थियो।
डोमिनिनीमा भेटिएको अर्को खोज उनको छातीमा एक जूताको एकमात्र छापिएको थियो जुन स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको थियो कि यो डाक्टर द्वारा लिइएको तस्विरमा कैद गरिएको थियो।
अलबामा राज्यका प्रमुख मेडिकल परीक्षक डा। जेम्स डाउन्सले ग्यारेन्टी गरे कि उनले जूता प्रिन्टको स्यान्डल्स सम्म लिईएको फोटोहरूको तुलनामा ब्ल्यामोनको हत्याको दिन पहेंलो भयो।
यो उनको भनाइ थियो कि सैंडल को एकमात्र Dominiqua छाती मा एम्बेडेड छाप संग मेल खायो।
Downs ले पनि भन्यो कि उनको विश्वास थियो Dominiqua एक पूल क्यू संग उनको सबैभन्दा हालको चोटहरु को परिणामस्वरूप मारा गएको थियो।
विवेन जॉनसन, ब्ल्यामोनका बुबाको गवाहीले देखाएको थियो कि ब्लिममोनले हत्याको बेलुकी डोमिनिकाको हेरचाह गर्ने मात्र व्यक्ति रहेको थियो, जबसम्म उनीहरुले90 बजे ब्ल्यामोनको घरमा पुग्दा सम्म सम्म उनीहरु सम्म पुग्न सकेनन्।
जॉनसनले ग्यारेन्टी गरे कि रात डोमिनिकालाई मारिएको थियो, उनले उनलाई रातोमा डोमिनिका देखाए र उनले राम्रो देखिन्छ, खेल खेल्दै र सामान्यतया अभिनय गरे। उनले ब्ल्यामोन र डोमिनिनी क्वेयरले आफ्नो घर 8 बजेतिर छोडे
ब्ल्यामोनको मोबाईल घरको खोजीले धेरै रगत बहाइयो। फोरेंसिक परीक्षणले एक टूटा पूल क्यु, रक्तको टी-शर्ट, एक गुलाबी फ्ल्याट पाना पाना, एक रजाई, र दुई नपकिन्समा रगत फेला पारे। डोमिनिकाका रगतसँग मिल्दो सबै वस्तुहरूमा पाइन्छ।
उनको रक्षामा, ब्लिममोन ले भन्यो कि त्यो बच्चा बिस्तारै बिस्तारै घाइते भएको थियो। ब्ल्यामोनले उनको चरित्रमा गवाही गर्न धेरै वर्ण साक्षीहरूलाई बोलाए। मानव संसाधन विभाग को एक कर्मचारी जुडी कैलीले भन्यो कि उनको रायमा, ब्लिममोन र डोमिनिनीको राम्रो सम्बन्ध थियो।
डोलीको र ब्ल्यामोनले अगस्त 1 99 8 देखि पाँच महिनाको लागि एक महिनामा डोरीको सम्पर्क गरेकी थिमीले ब्ल्यामोनको छिमेकीले टोमी फ्रे फ्र्यानम्यानलाई साक्षी दिए कि उनी प्रायः आफ्ना छोराछोरीलाई ब्ल्यामोनको हेरविचारमा छोडे।
जेरीले राजधानीको हत्याको ब्ल्यामोनलाई दोषी ठहराए। एक अलग सजावट सुनुवाई आयोजित भएको थियो, जसमा राज्य उत्खनन परिस्थितिमा निर्भर थियो कि हत्या विशेष गरी असाध्यै, अत्याचार, वा मृत्युको सजायको समर्थन गर्न क्रूर थियो। सजाय सुनाउन पछि ज्यूरी, 10 देखि दुई को मतदान गरेर, मृत्युको सजाय सिफारिस गरियो।
अगस्त 2005 मा, ब्लिममोनले अदालतलाई अपील गरे, तर्क दिए कि राज्य प्रमाणित गर्न असफल भयो कि हत्या विशेष गरी, हानिकारक, क्रूर वा अन्य क्रान्तिकारी हत्याको तुलनामा क्रूर थियो। उनले तर्क दिए कि राज्य प्रमाणित गर्न असफल भए डोमिनुकाना कुनै पनि आक्रमणको समयमा होशियार थिए र त्यो उनीहरूको सामना गर्नु भयो।
ब्ल्यामोनले विश्वास गरे कि डोमिनिनि अज्ञात ढोका लगाइएको थियो, पहिले ब्ल्यामोनले उनलाई हरायो, र नतीजाको रूपमा, बच्चाले पीडाको दुखाइ महसुस गरेन। उनको अपील रद्द गरिएको थियो।
पेट्रिया ब्ल्यामोनले अब टुटवालर कलेजको लागि ग्वालम्पका, अलबामामा महिलाहरु मा मृत्यु पङ्क्तिमा बस्छ।
महिला अपराधी, मृतक, रैपिस्ट, अपहरणकर्ता र चोर A - Z
रोबिन पंक्ति प्रकरण: पतिको अन्तिम बेथेलल
Shawn Hornbeck अपहरण: किन उहाँ आफ्ना कप्तानबाट भाग्नुभएन?
मानन परिवारको स्न्यापसट
हन्ना विल्सन को हत्या
डार्सी पियर्स - सिडी रे को हत्या
शंडा शेररको हत्या
पति हत्यारा केली गिसेंद्रन को प्रोफाइल
सामान्य अस्पतालको सबै समयको सबैभन्दा ठूलो शकर
लेखनमा एट्रिब्युसन के हो?
एरटेक्स को हर्नन कोर्ट्स 'विजय को समय
शीर्ष 20 देशको प्रेम गीतहरू डिसेडमा
नायलॉन स्ट्रिङको इतिहास
नोकियन हाकिपालिटिटा आर2स्नो टायर समीक्षा
स्विचन स्ट्रिङमा राइडिङ स्केटिङबोर्ड
फुटबल स्काउटको भूमिका
शिकागो बूथ एमबीए कार्यक्रम र प्रवेश
स्टेग बीटल्स, परिवार लुकानेडा
कसरी डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस् Open Watcom C / C ++ Compiler
0.5M EDTA समाधान पकाउनुहोस्
माप र मानक अध्ययन गाइड
11 अमरीकी डालर को लागि अन्तरराष्ट्रीय स्तर को अन्तर्गत अन्तर्वार्ता प्रदान गर्दछ
जनसंख्यामा थमस माल्थस
2011 हार्ले डेभिडसन क्रेता गाइड
ग्रीक पौराणिक कथाहरु को देवी
एक टुक्रा एनिमे एपिसोडहरू जहाँ निःशुल्क निःशुल्क हेर्नुहोस्
ब्याकस्लाइडिङमा बाइबल पदहरू
विशाल स्पाइडर म्यानचेस्टरमा फेला पर्यो?
सारा पलिनको ग्रिडिरन भाषण
तपाईंको अनुहार घाटको रूपमा डराउँछ
दमन गरिएको साक्ष्य गिरिजा
पुरातन ईरान को फारसी साम्राज्य
हेन्डसनसन Hasselbalch समीकरण परिभाषा
आदेश र अनुरोध बनाउने अन्य तरिका
चित्रा स्केटिङ कपडाहरूको एक चित्रित इतिहास